Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): Princess Diana (ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ)
ဒိုင်ယာနာ ၏ ဘ၀ ဇတ်လမ်း အကျဉ်းချုပ်။
ရုပ်ရှင် မင်းသား၊ မင်းသမီး- အနုပညာ လောက မှ မဟုတ်ပါပဲလျှက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဓါတ်ပုံ အများဆုံး အရိုက်ခံရသူကို ညွှန်ပြပါ ဆိုလျှင်- ထိုသူ သည် ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာမှ လွဲ၍ အခြားသူ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူမအား ၁၉၆၁-ခုနှစ်- ဇူလိုင်လ -၁-ရက် နေ.တွင် အင်္ဂလန်မင်းမျိုး အနွယ်ဝင် တို.ပိုင်ဆိုင်သော ဆန်ဒရင်ဟမ် တွင် မွေးဖွား ခဲ့ပါသည်။ ဒိုင်ယာနာ ၏ ဖခင်သည် ဘုရင် စတူးဝပ်မှ- တစ်ဆင့် ဆင်းသက်လာ သော အနွယ်တော် ဖြစ်ကာ- ဒုတိယ မြောက် ချားလ်စ် ဘုရင် (၁၆၃၀-မှ ၁၆၈၅) မှ တိုက်ရိုက် ဆင်းသက်လာသော အနွယ် ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ် ဘ၀တွင် ဒိုင်ယာနာသည် သူမနှင့် ရွယ်တူ ဖြစ်သော မင်းသား အင်ဒရူး နှင့် မင်းသား အက်ဒွပ် တို.နှင့် ကစားဖော် ဖြစ်ခဲ့ သည်။ ဒိုင်ယာနာတွင် ဆာရာ နှင့် ဂျိန်းန် အမည်ရှိ အမ-၂-ယောက် ရှိခဲ့ကာ- မောင် ဖြစ်သူ ချားလ်စ် ဆိုသူ လည်း ရှိခဲ့သည်။
ဒိုင်ယာနာ အသက်- ၆-နှစ်သမီးတွင် မိခင် ဖြစ်သူသည် ဖခင် ထံမှ ထွက်ခွာ သွားပြီး ၁၉၆၉-တွင် မိဘများ တရားဝင် ကွာရှင်း ခဲ့ပြီး နောက် ဖခင် ဖြစ်သူမှ- ကလေးများကို အုပ်ထိမ်း စောင့်ရှောက်ခွင့် ရခဲ့သည်။
သို.နှင့်ပင် ၁၉၇၅-တွင် ဖခင် အနေဖြင့် အမှတ်စဉ် ၈-ဦးမြောက် “အားလ် စပင်ဆာ“ ဘွဲ.ကို ရရှိ ခဲ့ခြင်းဖြင့် ဒိုင်ယာနာ မှာလည်း “လေဒီ ဒိုင်ယာနာ“ အဖြစ်သို.ရောက် ခဲ့ပါသည်။
ဘဲလေး အကကို လွန်စွာ ၀ါသနာ ပါခဲ့သော်လည်း- အရပ်ရှည်လွန်း သဖြင့် (အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ဒိုင်ယာနာသည် ၅’ ၁၀” အရပ် အမြင့် ရှိသည်။) ၄င်း အနေဖြင့် စွန်.လွှတ်ခဲ့ရသည်။
၁၉၇၈-တွင် ကျောင်းပြီး ပြီးနောက်- ကလေးထိန်း အဖြစ်လည်းကောင်း၊ စားပွဲထိုး သမ၊ သန်.ရှင်းရေး အလုပ်သမ စသော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင် ပြီးနောက် တွင် လန်ဒန်မြို.ရှိ- Young England kindergarten မူကြိုကျောင်း တွင် ဆရာမ အဖြစ် အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ (မိဘတို.သည် အင်္ဂလန် မင်းမျိုးနှင့် ဆက်နွယ် နေသော အမျိုး ဖြစ်၍၊ ဖခင်သည်လည်း အလွန် မြင့်မားသော တော်ဝင်ဘွဲ. ရရှိထားသူ ပင် ဖြစ်သော်လည်း- အရွယ်ရောက် သည်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ် ကို အားကိုး လိုသော စိတ်ဓါတ်ကို သတိပြု မိစေလိုပါသည်။)
၁၉၈၀ တွင် သူမထက် ၁၂-နှစ်ကြီးသော ဝေလမင်းသား ချားလ်စ်နှင့် အချစ်ဇတ်လမ်း စတင်ခဲ့သည်။ အမှန် အားဖြင့် ချားလ်စ်သည် ဒိုင်ယာနာ၏ အမ ဖြစ်သူ ဆာရာနှင့် ဇတ်လမ်း ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍- ဒိုင်ယာနာ အနေဖြင့် ဘယ်သွားသွား၊ သတင်းလောက ၏ နောက်ယောင်ခံ လိုက်မှုကို စတင် ရရှိ လိုက်ပါတော့သည်။
သို.နှင့် ၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ- ၂၉-ရက်တွင် စိန်.ပေါ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် မင်္ဂလာ ဆောင်ခဲ့ ပြီး- ထိုမင်္ဂလာပွဲကို နိုင်ငံပေါင်း ၇၄-နိုင်ငံသို. လွှင့်ထုတ် ဖေါ်ပြခဲ့သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သန်း ၇၅၀-ကျော်သော ပြည်သူတို. မြင်တွေ.ခဲ့ကြရပါသည်။
ဇာတာရှင်၏ ငယ်ရွယ်စဉ် ကာလမှ ၁၉၈၄ အထိ၊ မိုးတား စနစ် (MOTAA Vedic System) ကို အသုံးပြု ရေးဆွဲထားသော ကံကြမ္မာ ဂရပ်ဖ် ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အိမ်ထောင်ကျပြီး တွင် တော့ သူတို.၏ အချစ်ဇတ်လမ်းမှာ- ပြဿနာတို. စတင်လာပါတော့သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ချားလ်စ် မင်းသား အနေဖြင့် အချစ်ဟောင်း ဖြစ်ခဲ့သူ ကမ်မီလာ နှင့် ဇတ်လမ်း မပြတ်သဖြင့် ဒိုင်ယာနာ ကိုယ်တိုင်က ပြောခဲ့သည် မှာ- “ကျွန်မ တို. အချစ်ဇတ်လမ်းမှာက- လူသုံးယောက် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ နည်းနည်း လူကြပ် တာပေါ့။” ဟု ဖြစ်သည်။
ထို.ကြောင့်လည်း ၁၉၉၂-တွင် အင်ဒရူး မော်တန် ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သော ဒိုင်ယာနာ အထုပ္ပတ္တိစာအုပ်တွင် ၁၉၈၀ နှစ် အစဦး များ အတွင်း-သူမနေဖြင့် မိမိ ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေရန် ၅-ကြိမ် အားထုတ်ခဲ့သည် ဟုဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်။
သို.သော်လည်း သူမသည် လူသားအားလုံးတို. အတွက်- အလှူငွေ ရံပုံငွေများ အတွက် အလွန် ထက်သန်စွာ အလုပ်လုပ် ခဲ့သည်။
၁၉၉၁-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ တွင် သားကြီး ဖြစ်သူ ၀ီလျံ ဂေါက်တံ ဖြင့် ရိုက်မိသော မတော်တစ်ဆ မှုကြောင့် ဦးခေါင်းခွံ အက်သွား သဖြင့် ဒိုင်ယာနာသည် ဆေးရုံတွင် ၂-ည အိပ်ခဲ့ ရသည်။ ဖခင် ဖြစ်သူ ချားလ်စ် မှာမူ- အော်ပရာ ပွဲသို. သွားရန် လမ်းကြုံသဖြင့် ဆေးရုံသို. တစ်ခေါက် ၀င်ကြည့်သွားခဲ့သည်။ ထို.နောက်တွင် တော့ ဒိုင်ယာနာ အသက် ၃၀- ပြည့် မွေးနေ.ပွဲကို ချားလ်စ် နှင့် ဒိုင်ယာနာ တို. အတူ မကျင်းပ ခဲ့ကြတော့ပေ။
၁၉၉၂-ခုတွင် ဒိုင်ယာနာ အနေဖြင့် သူမနှင့် ချားလ်စ် မင်းသားတို.၏ ဇတ်လမ်းကို အများပြည်သူ အား ဖွင့်ချ ဖော်ထုတ် ရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။ သူမ၏ အထုပ္ပတ္တိရေးသူ အင်ဒရူး မော်တန်အား လျှို.၀ှက်စွာ ၀င်ရောက် ကူညီခဲ့ပြီး- သူမ၏ ပါဝင် မှုကို သူမ သေဆုံး ချိန် အထိ မဖော်ထုတ်ခဲ့ပါ။
အိမ်ထောင်ရေး- ကွဲကွာ မှုအား ၁၉၉၂-ဒီဇင်ဘာလ-၉ -ရက်တွင် ကျေညာ ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်တွင် တရားဝင် အဖြစ်သို. ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၇-တွင် ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး တစ်ဦး ဖြစ်သူ မိုဟာမက် အယ်လ်ဖါယဒ် ၏ သားဖြစ်သူ ဒိုဒီ အချစ်ဇတ်လမ်း စတင် ခဲ့သည်။
ဒိုင်ယာနာ ၏ လျှို.၀ှက် အချစ်ဇတ်လမ်း။
ဤသည်မှာ အများသိထားကြသော ဒိုင်ယာနာ နှင့် ဒိုဒီ တို.၏ အချစ်ဇတ်လမ်း ဖြစ်သော်လည်း အချို.သော အချက် အလက်များ အရ- သူမ အနေဖြင့် အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးသော ယောက်ျား တစ်ယောက် မှာ အင်္ဂလန် တွင် နှလုံးရောဂါ အထူးကု ခွဲစိတ် သမားတော် တစ်ဦး အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသူ ပါကစ္စတန် လူမျိုး ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် ဖြစ်သည်။
၁၉၉၄ တွင်- သူမ၏ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ ပျက်ပြား နေသည့် နောက်- တစ်ဦးတည်း အထီးကျန် ကြေကွဲ မှုများနှင့် ခံစားရ နေချိန်တွင် သူမ၏ မိတ်ဆွေ တစ်ဦး နှလုံးခွဲစိတ် ကုသရန် လိုအပ်သဖြင့် ဆေးရုံသို. သွားရောက် ရာမှ အင်မတန် တည်ကြည် သော်လည်း၊ မိန်းမ တို.နှင့် ပါတ်သက်လျှင် ရှက်ကိုး ရှက်ကန်း ဖြစ်တတ်သော ပါကစ္စတန် လူမျိုး ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် ကို စတင် တွေ.ရှိခဲ့ရသည်။
ထို.နောက်တွင် တော့ ဒိုင်ယာနာသည် တော်ဝင် ဘရိုင်တန် ဆေးရုံ တွင် ဝေဒနာသည် များအား-သွားရောက် အားပေး ရင်း- ရံဖန် ရံခါ ဆိုသလို နှလုံး ခွဲစိတ်မှုများကိုပါ ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုယင်း- ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် နှင့် အချိန် များစွာ တွေ.ဆုံ ခဲ့ရသည်။
သူမ ပါတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးတွင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန် တွေးတတ်သော ဂုဏ်မြင့်သူများ၊ အကြင်နာ ကင်းမဲ့သူ များနှင့် နေထိုင် ပါတ်သက်ခဲ့ ရပြီးနောက်- လူသား ဆန်ဆန် ကြင်နာ တတ်သော၊ မိမိ၏ ဘ၀ကို ရောဂါ ဝေဒနာ သည် များအတွက် အချိန်ပြည့် နှစ်မြုပ်ထားတတ်သော ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် အပေါ်တွင် လေးစားခြင်း၊ ကြည်ညိုခြင်း ဖြစ်ခဲ့သည် သာမက-သူမ ၏ မပြည့်စုံ ခဲ့သော၊ ဘ၀ တစ်ဦးလုံးတွင် ဆာလောင် ငတ်မွတ်ခဲ့ရသော ချစ်သူ စစ်စစ် အဖြစ် သူမ လွန်စွာ ချစ်ခဲ့မိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သို.သော် လည်း- ဒေါက်တာသည် ဤကိစ္စများအား သတင်းထောက်များ ပြောပြရန် အသာထား၊ တွေ.ဆုံရန်ပင် ငြင်းဆန် ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် သည် ဘာသာရေးကို ကြည်ညိုလေးစားသော ပညာတတ် ပါကစ္စတန်- မိသားစုမှ မွေးဖွား လာသူ ဖြစ်သည်။ ရိုးရာ ထုံးတမ်း ဓလေ့ကို လိုက်နာသော မိဘ နှင့် အသိုင်းအ၀ိုင်း များ အနေဖြင့် သူ.အား အနောက် တိုင်းသူ ဘာသာခြား ကလေး ၂-ယောက် အမေ အမျိုးသမီးကို သဘောမတူ နိုင်သည် သာမက-၄င်း၏ ဖခင် မှ သူ.အား ပြောခဲ့သည်မှာ “ငါ့ ခွင့်ပြုချက် မရှိပဲနဲ.၊ ဘယ်မိန်းမကိုမှ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာအကြောင်း နှင့် ဖြစ်ဖြစ် မယူရ” ဟုဖြစ်သည်။
ဒိုင်ယာနာ အနေဖြင့် ဒေါက်တာ၏ ဘာသာ နှင့် လူမျိုး အလိုက် ဓလေ့ ထုံးစံ တို.ကို လေးစား ကြောင်း သက်သေ ပြသည့် အနေဖြင့်- ၁၉၉၆ ခုတွင် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသို. သွားရောက်၍ ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် ၏ ညီအကို ၀မ်းကွဲ တော်စပ်သူ ကရစ်ကက် ကစားသမား လည်း ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး သမားလည်း ဖြစ်သူ အီမရာခန် တည်ထောင် ထားသော ကင်ဆာ ရောဂါကု ဆေးရုံ သို. လိုက်သွား ခဲ့သေးသည်။
ပါကစ္စတန် မှ ပြန်လာပြီး၊ သူမနှင့် ချားလ်စ် တရားဝင် ကွာရှင်း အပြီးတွင် သူမ ချစ်သော ဒေါက်တာ ဟာစ်နက် ခန် ကို ပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိရေး အတွက် ကြိုးစား ပါတော့သည်။ သူမ ၏ သူငယ်ချင်း အချို.၏ အဆို အရ- ဒေါက်တာအား သူမ ကား နောက်ဖုံး တွင် ၀ှက်ကာ ခေါ်ယူပြီး ကင်းစင်တန် နန်းတော် (ဘာကင်နန်းတော် မဟုတ်ပါ) အတွင်း သို. လျှိုဝှက် ခေါ်ဆောင် ဘူးသည် ဟု ဆိုသည်။
မည်သို.နည်းမျှ- ရှေ.ဆက်တိုးရန် မကြိုးစား တော့သော ဒေါက်တာ အား- ယောက်ျား တစ်ယောက် အနေဖြင့် မခံချင် စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးစားယင်း- ကြေးရေတတ်၊ လူလည်၊ လူရှုပ် ဒိုဒီ နှင့် တွဲပြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဒိုင်ယာနာ ၏ နောက်ဆုံး ခရီး။
သို.သော်လည်း သူမနှင့် ဒိုဒီ တို.၏ ဇတ်လမ်းတွင် ပြင်သစ်ပြည် ပါရီ မြို.တွင် မြေအောက် ဥမင်အတွင်း- ၁၉၉၆-သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ.တွင် သွေးသံရဲရဲ ဖြင့် ဇတ်သိမ်း ခဲ့ရပါသည်။
ဒိုင်ယာနာ ၏ ဇာတာအား စစ်ဆေးခြင်း။
ဒိုင်ယာနာ ၏ မွေးချိန် အမှန်။
ဒိုင်ယာနာ၏ တရားဝင် ကြေညာ ထားသော မွေးချိန်မှာ- ၁၉၆၁-ခုနှစ်- ဇူလိုင်လ -၁-ရက် နေ.၊ ည ၇း၄၅ ဆန်ဒရင်ဟမ်တွင် ဖြစ်ပြီး၊ သူမ၏ မိခင် ဖြစ်သူက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ရှိ နက္ခတ္တဝေဒ ပညာရှင် ဖြစ်သူ ပယ်နီ သော်တန် ဆိုသူကို ပြောပြ ခဲ့သည်က- “၀င်ဘယ်လ်တန် တင်းနစ်ပွဲ မစခင်လေးပါပဲ၊ နေ.လယ် ၂-နာရီ ကျော်ကျော် လောက် ဖြစ်ပါတယ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အရှေ.တိုင်းဟိန္ဒူ ဝေဒနည်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်သော အခါ- ည ၇း၄၅ အနေဖြင့် မဖြစ် နိုင်ခြင်း၊ ည ၇း၄၅ ဟူသော အချိန်သည် ချားလ်စ် မင်းသားနှင့် လက်ထပ်ပြီး ဘာကင်ဟမ် နန်းတော် သို.ရောက်ပြီးကာမှ -တော်ဝင် နက္ခတ္တပညာ ရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးကာ- ထို အချိန်ဟု ကြေညာ ခဲ့ခြင်း တို. ကြောင့် MOTAA အနေဖြင့် နေ.လယ် ၂း၁၅ အချိန်ကို အမှန်ဟု ယူပါသည်။ ထိုအချိန်ကို MOTAA စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေး သော အခါလည်း ကိုက်ညီမှု ရှိနေသည်ကို တွေ.ရပါသည်။
သို.သော်လည်း အနောက်တိုင်း ပညာရှင် အများစု အနေဖြင့် မူ တရားဝင် ကြေညာထားသော အချိန် ည ၇း၄၅ ဖြင့်သာ တွက်ချက် လေ့ရှိကြပါသည်။ မွေးချိန် နှင့် ပါတ်သက်၍ စာဖတ်သူ များအနေဖြင့် အောက်ပါ Website တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဒိုင်ယာနာ ၏ မူလ ဘွားဇာတာ အားစစ်ဆေးခြင်း။
ဇာတာရှင်အား- ခရစ်သက္ကရာဇ် (1961-July-1- ရက်) ၊မြန်မာ သက္ကရာဇ်- ၁၃၂၃ခုနှစ်၊ ပထမ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်၊ ၄- ရက်၊ စနေနေ. တွင်၊ အင်္ဂလန် ဆန်ဒရင်ဟမ် ၌ မွေးဖွား သည်။ မွေးဖွားချိန်မှာ-နေ.လည်- ၂- နာရီ၊ ၁၅- မိနစ် တွင်- ဖြစ်သည်။
ဤဇာတာ အား စစ်ဆေးသော နေ.မှာ - 1997-August-31 (၁၃၅၉ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လပြည့်ကျော်၊ ၁၃- ရက် တနင်္ဂနွေနေ.) တွင် ဖြစ်သည်။ (မှတ်ချက်- ဇာတာရှင် သေဆုံးသော နေ.)
စစ်ဆေး ချိန်တွင် - ဇာတာရှင်သည် အသက်အားဖြင့်- ၃၆- နှစ်၊ ၂-လ၊ တင်းတင်း ပြည့်နေ ချိန် ဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
အောင်မြင် ကျော်ကြားမှု ကို ကိုယ်စားပြုသော တနင်္ဂနွေသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ နှင့် လူအများက မိမိကို သိရှိသော အနေအထား ဘ၀ ကို သရုပ် ဖေါ်သော ၁၀-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင် ကျော်ကြား ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်ရွေ.မည်မျှ ပမာဏ အထိ အောင်မြင် ကျော်ကြားနိုင် သည်ကို မူ အခြား ဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ၏ ပင်ကိုယ် အင်အားတွင် မူတည်သည်။
သို.သော်လည်း တနင်္ဂနွေသည် ၁၂-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် အဖြစ်ဖြင့် သည် ၁၀-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် လူမှုရေး ကိစ္စများကြောင့် အသုံးအစွဲ များတတ်သည်။ မိမိ၏ ထင်ရှားမှု ကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်လည် စိတ်ဆင်းရဲ ရခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေပါသည်။
တနင်္လာ ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
တနင်္လာသည် ၅-တန်.ဘာဝတွင် နေခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုကို အမြဲလိုလားသူဖြစ်သည်။ ဥာဏ်ကောင်း ခြင်း၊ အများ ချစ်ခင် အောင် နေထိုင် ပြောဆိုတတ် သော သူမျိုး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး၊ သံတမာန် ရေး တို.တွင် စိတ်ဝင်စားတတ်ပြီး၊ ချစ်ခင် ကြင်နာ တတ်သော သဘာဝရှိသူဖြစ်သည်။
တနည်း အားဖြင့် လည်း- တနင်္လာဂြိုဟ်သည် ၁၁-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် အဖြစ်ဖြင့် ၅-တန်.တွင် တည်ခြင်း ဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ကံကောင်းသော၊ ပင်ကိုယ် ဥာဏ် ကောင်းသော၊ စိတ်ကောင်းရှိသော၊ ကြင်နာ တတ် သော သူဖြစ်သည်။
တနင်္လာဂြိုဟ် အား မည်သည့် ဂြိုဟ်ဆိုးများကမှ- လွှမ်းမိုး သက်ရောက်ထားခြင်း မရှိပါ။ ထိုမျှ မက- တနင်္လာဂြိုဟ် ရပ်တည်ရာ ၅-တန်.ဘာဝ ၏ဗဟိုချက်နှင့် - ၄င်းပိုင်ဆိုင်ရာ ၁၁-တန်.ဘာဝ ၏ဗဟိုချက်နှင့် တို.ကို မည်သည့် အဆိုး အား တို.က သက်ရောက်နေခြင်း မရှိပါ။ ထို.အပြင် တနင်္ဂနွေ၏ တိုက်ရိုက် နေရောင် သင့်မှု (အတ္ထမိခြင်း) လည်း မရှိပါ။
ထိုအချက်သည် မြန်မာပညာရှင် များအခေါ်-စန်းအား ကောင်းသည် ဆိုသော အနေအထားတွင် ရှိနေခြင်းကြောင့်-ဇာတာရှင်အား အများက ချစ်ခင်ခြင်း၊ လူထု၏ ထောက်ခံမှု ရခြင်း ဆိုသော အချက်ကို ဖြစ်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို.သော် တနင်္လာဂြိုဟ် အနေအထား ကောင်းရုံမျှ ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာ ခြင်းဆိုသော အချက်ကို မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို နောက်ပိုင်း ဆန်းစစ် ချက်များတွင် တွေ.နိုင်ပါသည်။
အင်္ဂါ ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
အင်္ဂါသည် ၁၁-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်းကြောင့် ၊ မောင်နှမ အကြီးများ (သို.မဟုတ်) မိတ်ဆွေများ နှင့် မကြာခဏ အငြင်းပွားရတတ်သည်။ ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အမြဲတမ်း အသစ် အဆန်းတစ်ခု တီထွင် ထိုးဖေါက် လုပ်ဆောင် ရန် ကြံစည် စိတ်ကူး နေတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် အများနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်း များတွင် ဖြစ်သည်။
တနည်း အားဖြင့်လည်း ၈-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော တနင်္လာ သည် ၁၁-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် မွေးချင်း အကြီးများနှင့် မသင့်တင့်တတ် ခြင်းကို ထပ်မံရည်ညွှန်းနေသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်အား - အခြားဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်းမိုးကို ကြည့်လိုက်သော အခါတွင် တော့-အောက်တွင် မြင်ရသည့် အတိုင်း ကိတ်ဂြိုဟ်မှ သမသတ် အမြင်ပြုထားပြီး၊ ရာဟု မှ နီးကပ်စွာ ပူးထား သည်ကို မြင်ရ ပါတော့သည်။
အင်္ဂါသည် သိဟ်ရာသီ- ၈း၁၁ အံသာ (ဒီဂရီ) တွင် တည်ပြီး၊ ၄င်းအား ကုမ်ရာသီ ၄း၅၁ အံသာ တွင် တည်သော ကိတ်မှ သမသတ် အမြင်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ သိဟ်ရာသီ ၄း၅၁ အံသာ တွင် တည်သော ရာဟုမှ ပူးကပ် ထားခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဇာတာရှင်၏ အင်္ဂါသည် ဆိုးရွားသော- အနေအထားကို ရရှိနေပါတော့သည်။ ၄င်းဂြိုဟ်ဆိုး ၂-လုံး မှ ၇၉% စီဖြင့် အဆိုးအားကို စုပေါင်း ရထား သဖြင့် သွေးထွက်သံယို ထိခိုက်မှု ရနိုင်သော အနေအထား ကို မြင်နေရသည်။
အထူးသတိပြုရန် မှာ- ဤသို.သော ကိစ္စမျိုးတွင်- MOTAA စနစ်ကို လေ့လာသူများ အနေဖြင့် အင်္ဂါအား -ရာဟုနှင့် ကိတ်မှ လွှမ်းမိုးတိုင်း သွေးထွက်သံယို ဖြစ်မည်ဟု ပုံသေ မယူဆ ရန်လိုပါသည်။ ဆက်လက်၍ ရာဟုနှင့် ကိတ် တို.၏ ရပ်တည် ရာ အနေအထား ဘာဝ၊ န၀င်းနှင့် နက္ခတ် တို.ကို လေ့လာရန် လိုပါသည်။
ယခုဇာတာ တွင် ရာဟုသည် ကိတ်ဂြိုဟ် ပိုင်ဆိုင် သော မာဃ နက္ခတ် တွင် တည်နေခြင်းဖြင့်- ထိုရာဟုသည် ဇာတာ ရှင်အား ဒုက္ခပေးမည့် ရာဟု အစစ်အမှန် ဖြစ်သည်ကို သိရန်လိုပါသည်။ ထိုနည်းတူ ကိတ်သည် သွေးထွက် သံယိုကို ကိုယ်စားပြုသည် အင်္ဂါပိုင် နက္ခတ် တွင် ရှိနေသည်ကို ပါ သိထားရန် လိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် -၉-တန်.တွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် အတွေးအခေါ် သဘော တရားတို.ကို နားလည် နိုင်သော သူမျိုး ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့် ၁-တန်.ဘာ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် သည် ၉-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည် ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ကံကောင်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် အနေအထား ဘ၀ ရပ်တည်မှု ကို ပိုင်ဆိုင် ရနိုင်သူ မျိုးဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် အားလည်းကောင်း၊ ၄င်းပိုင်ဆိုင်ရာ- ၁-တန်.ဘာဝ၏ ဗဟိုချက်မှတ် အားလည်းကောင်း၊ ၄င်း ရပ်တည် ရာ- ၉-တန်. ဘာဝ၏ ဗဟိုချက်မှတ် အားလည်းကောင်း၊ မည်သည့် ဂြိုဟ်ဆိုးတို.ကမှ- လွှမ်းမိုး သက်ရောက်ထားခြင်း မရှိပါ။ ထို.ကြောင့် လည်း စကားပြောခြင်း၊ နှင့် အတွေးအခေါ် ပိုင်းတို.တွင် ဇာတာရှင်သည် ကောင်းမွန် မြင့်မြတ် သော သူမျိုးဖြစ်သည်။
သို.သော် MOTAA အခြေခံတွင် ရှင်းပြခဲ့သည့် အတိုင်း- ကန်လဂ် ပိုင်ရှင် တို.အနေဖြင့်- အမြဲလိုလို စိုးရိမ် နေရ တတ်မှု၊ စိတ်အားငယ် တတ်မှု၊ ဘ၀တွင် အပြောင်းအလဲ တို.ဖြင့် ရင်ဆိုင်ရ တတ်မှု တို.ကို မူ MOTAA ပညာ ကို လေ့လာသူများ အနေဖြင့် သတိချပ်ရန် လိုပါသည်။ ထိုအချက်ကို ထောက်ပံ့ နေသော အခြား အချက်တစ်ခု မှာ- ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် - သည် ၄င်းပိုင် ရာသီ တွင် (မူလတြိဂေါဏ အိမ် မဟုတ်ပါ။) ရာဟု ပိုင် နက္ခတ်တွင် တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြာသပတေး ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ကြာသပတေးဂြိုဟ် -၅-တန်.တွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ဥာဏ်ပညာ ကြီးမားလိမ့်မည်။ စွယ်စုံ ပညာရှင် ဖြစ်နိုင် သည်ဟု ၍ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုရပါလိမ့်မည်။ သို.သော်လည်း-ထိုအချက် များ ဖြစ်ရန် အတွက်- ကြာသပတေးသည် အားကောင်း ရန် လိုအပ် ပါသည်။ ပညာရေး ကောင်းမည် ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သော်လည်း- အမှန် အားဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ပုံမှန် ထက် ထူးခြားသော ပညာရေး မရှိခဲ့ပါ။
နောက်တနည်း အားဖြင့်လည်း- ၄-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်ဖြစ်သော ကြာသပတေးဂြိုဟ် (တနည်း အားဖြင့် ပညာ ဥာဏ်ကို အစိုးရသော) သည် ၅-တန်. (ပညာရေးဘာဝ) တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ဥာဏ်ကောင်း သောသူ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုရ ပါလိမ့်မည်။ သို.သော် ဥာဏ် ကောင်းသူ တိုင်းလည်း ပညာထူးချွန်သူ၊ ဘွဲ.လွန် ရသူများ မဟုတ်ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ပါလဲ။ (မှတ်ချက်- ၄-တန်. ဘာဝ သည် ဇာတာရှင်၏ မှတ်ဥာဏ်နှင့် ၊ အခြေခံ ပညာရေးကို ဖော်ဆောင်၍ ၅-တန်.ဘာဝသည် ဇာတာရှင်၏ ပညာ ဥာဏ်ကို ဖော်ဆောင်ထားသည်။)
အဓိက အကြောင်းတစ်ခုမှာမူ့- ကြာသပတေးသည် နိစ်ရာသီ ဖြစ်သော-မကာရ ရာသီတွင် တည်နေသည်။ ထိုအချက် သည် ကြာသပတေး၏ အင်အားကို ယုတ်လျော့ စေသော အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ ဆက်လက်၍ ကြာသပတေး အား၊ ဂြိုဟ်ကောင်း တို.၏ ထောက်ပံ့ ထားသော အင်အား မရှိခြင်း၊ ကြာသပတေး သွားရောက် ရပ်တည် ရာ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော စနေပေါ် တွင်လည်း အခြားသော ထောက်ပံ့ ထားသော အင်အားများ မရှိခြင်း၊ တို.ကြောင့် ပင် ဖြစ်သည်။
သို.သော်လည်း ဂြိုဟ်ဆိုးတို.၏ လွှမ်းမိုးမှု ကင်းဝေးသဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ဥာဏ်ကောင်း သူ ဖြစ်သော်လည်း ပညာရေး အလွန် ထူးချွန် မှု မရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။
အသိဥာဏ် ကို အစိုးရသော ကြာသပတေးသည်- တွယ်တာမှု သံယောဇဉ်ကို ကိုယ်စားပြုသော ၅-တန်.ဘာဝ တွင် တည် ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် တစ်စုံ တစ်ဦး အပေါ်တွင် လွန်စွာ သံယောဇဉ် ကြီးတတ်ခြင်း၊ အချစ်ကို လွန်စွာ စိတ်ကူး ယဉ်တတ် ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေပါတော့သည်။ ၅-တန်.ဘာဝ သည် ပညာရေး၊ သားသမီး တို.ကို အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သည် သာမက- သံယောဇဉ် ဖြင့် ချစ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန် ချစ်ခြင်း တို.ကို ပြဆိုသော ဘာဝ လည်း ဖြစ်သည်။
သောကြာ ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ယာဉ်ရထားကို ကိုယ်စားပြုသော သောကြာဂြိုဟ် သည် သေဆုံးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသော မရဏ ဘာဝ ၈-တန်.တွင် ရပ်တည် နေ၏။ ပုံမှန် အားဖြင့် ဂြိုဟ်တစ်လုံးသည် ဒုဌာန ဘာဝ ဖြစ်သော ၆-တန်.၊ ၈-တန်.၊ ၁၂-တန်. တို.တွင် တည်သော် ၄င်း၏ အင်အား ယုတ်လျော့ သွား၏။ သို.သော် အဘယ့်ကြောင့် ဇာတာရှင်သည် လှပသော အဆင်း ရှိခြင်း၊ လူ အများ၏ အချစ်ကို ရရှိခြင်း၊ စည်းစိမ် ချမ်းသာ နှင့် ပြည့်စုံ ရခြင်း တို. ဖြစ်နေရပါသလဲ။
သောကြာ သည် တနင်္ဂနွေ ပိုင်သော နက္ခတ်ကို စီးနင်း ထားသည်။ ထို.ကြောင့် တနင်္ဂနွေ၏ အလင်းရောင် အရှိန် အ၀ါကို ရထား၏။ (တနင်္ဂနွေသည် ၁၂-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင် ဖြစ်ခြင်း ကို မမေ့ပါနှင့်။)
သောကြာ သည် လဂ်မှ ၈-တန်.တွင် ရပ်တည်၍- ၂-တန်.ဘာဝ ၏ ဗဟိုချက်ကို အမြင် ပြုထားသည်။ လွှမ်းမိုးမှု ပမာဏ မှာ ၆၇% စီ ရှိသည်။ ၂-တန်.သည် ဇာတာရှင်၏ အဆင့် အတန်း ကို ဖော်ပြသော ဘာဝ ဖြစ်၍ သောကြာသည် အလှအပ စည်းစိမ် ချမ်းသာကို ဖော်ပြသော ဘာဝ ဖြစ်သည်။တနည်း အားဖြင့် ဇာတာရှင်၏ အလှအပ သည် ၄င်း ၏ ကျော်ကြား အောင်မြင်မှု အဆင့်ကို ဖြစ်စေခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ထို.ကြောင့်လည်း သောကြာသည် ၈-တန်.တွင် တည်သော်လည်း အတိုင်း အတာ တစ်ခု အထိ အင်အား ရှိနေခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဇာတာရှင်သည် လှပရခြင်း၊ အများ၏ ချစ်ခင်မှု ခံရခြင်း၊ တို.ကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။
သို.သော်လည်း- အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ၁၂-ဘာဝ ပိုင်ရှင် တနင်္ဂနွေပိုင် နက္ခတ်တွင် တည်နေခြင်း၊ ၈-တန်.ဘာဝ ခေါ်မရဏ ဘာဝ တွင် တည်နေခြင်း ကြောင့် မော်တော်ယာဉ် အန္တရယ်ကို လည်း ပြဆိုနေပါသည်။
တစ်ဖန် ၂-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော သောကြာ သည် ၈-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် စိတ်ခံစား လွယ်တတ်သည်။ အချစ်ရေး အိမ်တွင်းရေး စိတ်ချမ်းသာ မှု ရရန် ခက်ခဲသည်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးတို.နှင့် ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်သော အနေအထား ကို တွေ.နေ ရပါတော့သည်။
စနေ ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
MOTAA စနစ် အရ- ၆-တန်.၊ ၈-တန်.၊ ၁၂-တန်.တို.၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် များကို ကာရက ဂြိုဟ်ဆိုး။ အခြား ဘာဝ အိမ်ရှင် များကို ကာရက ဂြိုဟ်ကောင်းဟု သတ်မှတ် ထားရာ၌၊ သဘာဝ ဂြိုဟ်ဆိုး၊ သဘာဝ ဂြိုဟ်ကောင်း ကို ပစ်ပယ် မထားပါ။ သဘာဝ ဂြိုဟ်ဆိုးများ ဖြစ်သော စနေနှင့် အင်္ဂါ တို.၏ စရိုက် ကို အစဉ် သတိပြု လေ့လာရန် လိုပါသည်။ ဤဇာတာ အတွက် စနေသည် သဘာဝ ပါပ ဖြစ်သည်သာ မက-၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်လည်း ဖြစ်နေခြင်း ဖြင့်- အလွန်ဒုက္ခပေးသော ဂြိုဟ်တစ်ခု ဖြစ်နေ သည်ကို တွေ.ရပါသည်။ သို.သော်- ဤစနေ သည် ဇာတာရှင်၏ မူလ ဇာတာတွင် အခြားသော ဂြိုဟ်များကို နှောက်ယှက် ထားမှု မရှိခြင်း၊ ဘာဝ တို.၏ ဗဟိုချက်မှတ် များ အပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး သက်ရောက်မှု မရှိခြင်းကြောင့်၊ ဇာတာရှင် အနေဖြင့် မသေဆုံးမီ ကာလ အထိ စည်းစိမ် ချမ်းသာ ပြည့်စုံခြင်း၊ အဆင်း ရူပကာ လှပတင့်တယ်ခြင်း၊ အများ တကာ၏ ချစ်ခင်မှု ကို ခံစား၊ စံစား ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤဇာတာ တွင် သဘာဝ ပါပ၊ ကာရကပါပ စနေဂြိုဟ် သည် ၄-တန်.ဘာဝတွင် တည်နေခြင်း ဖြင့် ပျော်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာ မှုများ ကင်းဝေး နေတတ်သည်။ လူကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း များကို သိပ် အရေးစိုက်လိုသော ဆန္ဒ မရှိတတ်ပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့် ၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၄-တန်.တွင် တည်ခြင်းဖြင့် မိခင်နှင့် ပါတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်းရေး တွင် လည်းကောင်း၊ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှု မရတတ်ပါ။ စိတ်ထဲတွင် ခံစားမှုတို. ရောပြွမ်း ရှုပ်ထွေးနေတတ်သည်။ လက်အောက် ငယ်သား ကံမကောင်းပါ။ ဒိုင်ယာနာ အနေဖြင့် မိမိ၏ ၀န်ထမ်း တို.မှ ၄င်း၏ သွားလာ နေထိုင်မှုတို.ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်၍ သတင်း ဌာနများသို. ရောင်းစားခြင်းကို အစဉ် ကြောက်လန်. နေခဲ့ ရသည်။
အရေးကြီး ဆုံးအချက်မှာ- ပင်ကိုယ် သဘာဝ ကပင် အဆိုးဓါတ် ရှိသော စနေသည်- မတော်တစ်ဆ မှုကို ဖော်ဆောင် သော ၆-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင် အဖြစ်ဖြင့်- သယ်ယူ ပို.ဆောင် ရေး Transportation ကို ကိုယ်စား ပြုသော ၄-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့်- ခရီးသွားယင်း မတော်တစ်ဆ ဖြစ်မှုကို မြင်တွေ. နေရပါတော့သည်။
ရာဟု ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ပထမဦးစွာ ရှေးကျမ်းတို.၏ အယူ အဆများကို တင်ပြလိုပါသည်။
ဘရိဂု သျှတ္တရ ကျမ်း ၂၉-၃၀ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ် ကိတ်သည် ဇာတာ၏ ၁၁-တန်.တွင် တည်ပါက-ဇာတာရှင် သည် သားသမီး၊ ဥစ္စာ စည်းစိမ် တို.နှင့် ပြည့်စုံမည် ဆို၏။ ဖလဒီပက အဆိုအရ- ရာဟုဖြစ်လျှင် ဇာတာရှင်သည် ချမ်းသာပြီး၊ အသက်ရှည်လိမ့်မည်။ သို.သော်လည်း သားသမီးနည်းပါးမည်။ နားအာရုံနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ပြဿနာ ရှိတတ် သည်။ သမဂ္ဂါ စိန္တာမဏိကျမ်း အလိုအရ- ရာဟု ဖြစ်လျှင် ဇာတာရှင်သည် ဘာသာ မတူ သော သူများမှ တစ်ဆင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ ရမည်။ သားသမီး တို.အတွက် စိတ်ချမ်းသာရမည်။
ထိုအချက် တို.သည် မမှားပါ။ သို.သော် အတိအကျလည်း မမှန်ပါ။ ဥပမာ- ချမ်းသာ သော်လည်း အသက်မရှည် ခဲ့ပါ။
ထို.ကြောင့် ရှေးကျမ်းမြတ် တို.ကို မိမိ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ် ဖြင့် စိစစ် ဝေဘန် ပြီး- ဟောချက် ထုတ်မှသာ အဖြေမှန်ကို ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ (အထက်တွင် ရေးသားခဲ့သော စာပိုဒ်ကို ပြန်လည် လေ့လာပါ။)
ရာဟုနှင့် ကိတ် တို.၏ ရပ်တည် ရာ အနေအထား ဘာဝ၊ န၀င်းနှင့် နက္ခတ် တို.ကို လေ့လာရန် လိုပါသည်။
ကိတ် ဂြိုဟ်အား MOTAA စံနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ဘရိဂု သျှတ္တရ ကျမ်း ၁၁-၁၃ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ် ကိတ်သည် ဇာတာ၏ ၅-တန်.တွင် တည်ပါက-သားသမီး မရတတ်။ ရပါကလည်း ဆုံးပါးတတ်၏။ ဇာတာရှင် တွင် လေရောဂါ ရပြီး၊ မကောင်းမှု ပြုတတ်၏။ မင်းအစိုးရနှင့် ပြဿနာ တက်တတ်၏။ မနေချင်သော အရပ်ဒေသတွင် နေထိုင်ရတတ်၏။ ဖလဒီပက အလိုအရ- ကိတ်ဖြစ်ပါက-ဆိုးသော စရိုက်ရှိတတ်၏။ သမဂ္ဂါ စိန္တာမဏိကျမ်း အလိုအရ- ကိတ်ဖြစ်လျှင်- ၀မ်းဗိုက်နှင့်ပါတ်သက်သော ဝေဒနာရှိ၏။ သားသမီး နည်းပါး၏။ မည်မျှပင် သတ္တိရှိသော်လည်း အခြားသူများအား မှီခိုရတတ်၏။
အထက်တွင် မြင်ခဲ့သည့် အတိုင်းပင်- ရှေးကျမ်းတို.ကို အတိအကျ အာဂုံ ဆောင်၍ မျက်စေ့ မှိတ် ဟောခြင်း ဖြင့် ရလာ သော အဖြေမှာ မှန်နိုင်မည် မဟုတ် သည်ကို သတိချပ်ပါ။ ထို.ကြောင့် ရှေးပညာ ရှိတို.သည် တစ်စုံ တစ်ဦး အား နက္ခတ် ပညာ သင်ပေးမည် ဆိုပါက- ထိုသူ၏ ဇာတာကို စစ်ဆေး၍ ၄င်းကိုယ်တိုင် ဝေဘန် ပိုင်းခြား နိုင်သော ဥာဏ် ရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေး ပြီးမှ- ဗေဒင် နက္ခတ် ပညာကို သင်ကြား ပေးခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒိုင်ယာနာ ၏ သေဆုံးချိန်အား စစ်ဆေးခြင်း။
ဒဿာ နည်း ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
ဒိုင်ယာနာ သေဆုံးချိန် တွင် ကြာသပတေး ထူလ ဒဿာ၊ ရာဟု အန္တရဒဿာ ၊ ရာဟု ပြတန္တရ ဒဿာ တွင် ရှိနေပါသည်။
ပထမဦးစွာ- အနေဖြင့် နိစ်ရာသီ တွင် တည်နေသော ထူလ ဒဿာ ပိုင်ရှင် ကြာသပတေးသည် ဇာတာရှင် အား အဆိုးတရား တို.မှ- ကာကွယ် ပေးရန် မစွမ်းနိုင်ပါ။
ဒဿ ကာလတွင် ထင်ရှား သော ဖြစ်ရပ် ကို ဖြစ်စေသည့် အန္တရဒဿာ ရှင်နှင့် ပြတန္တရ ဒဿာ ရှင်မှာ- ရာဟု ဖြစ်နေသည်။ ဤဇာတာ အတွက် ရာဟုသည် ဆိုးရွား သော ဖြစ်ရပ် များ၏ စေတမန် ဖြစ်နေသည်ကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဆုံးရှုံး ပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေသော ကိတ်ဂြိုဟ် ပိုင်ဆိုင်သည့် မာဃ နက္ခတ်တွင် တည်သော ရာဟု လွှမ်းမိုးထား သော ဒဿာတွင် ဇာတာရှင် အတွက် ကြီးမားသော အန္တရာယ် ဖြစ်စေသည်က အခြေခံ အကြောင်း တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဂရပ်ဖ်သည် ဂြိုဟ်တို.၏ အင်အားကို မူတည်၍ ဒဿာ အနေအထား အလိုက် လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဇာတာရှင်၏ ကံကြမ္မာ အတက် အကျကို ဖေါ်ဆောင် နေသည့် ဂရပ်ဖ် ဖြစ်ပါသည်။
ကောဇာ ဂြိုဟ်များ ၏ အနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း။
၃၁-သြဂုတ်လ၊ ၁၉၉၇၊ မနက် ၄-နာရီ အချိန် ပြင်သစ်ပြည် ၊ ပါရီ မြို.အတွက် ဇာတာကို ဖွဲ.လိုက်သော အခါ အောက်ပါ အတိုင်း မြင်ရပါသည်။
ကောဇာ ဂြိုဟ်များမှ မူလ ဂြိုဟ်များ ပေါ်သို. အင်အား သက်ရောက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း။
ဒိုင်ယာနာ၏ မူလဇာတာတွင် တည်နေသော သောကြာဂြိုဟ် ထံသို.- ကောဇာ ရာဟုမှ ၉-တန်. အမြင်ဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် အတိုင်း မြင်နေရပါသည်။
မူလ သောကြာဂြိုဟ် သည် ပြိဿ ရာသီ ၀င်ကာစ- အစပ်လေးတွင် တည်နေ၍- ကောဇာ ရာဟု သည် သိဟ်ရာသီ ၂၅း၅၄ တွင် တည်နေသည်။ အမှတ်တမဲ့ အားဖြင့် အံသာ ကို သတိ မထား မိလျှင် ထိုအမြင်ကို သတိ မပြုမိနိုင်ပါ။ အမြင်လွှမ်းမိုး အား ၆၁% ရှိနေသဖြင့် ထိုအမြင်သည် ထင်ရှား သော အမြင် ဖြစ်နေပါသည်။
မူလဇာတာ တွင် သောကြာသည်- သေဆုံးခြင်းကို ဖော်ဆောင်သော မရဏ ဘာဝတွင် တည်၏၊ ဆုံးရှုံးခြင်း ကို ကိုယ်စားပြုသော တနင်္ဂနွေပိုင် နက္ခတ်တွင် စီးနင်း ထား၏။ ထိုသောကြာသည် စီးနင်းသော ယာဉ်ရထားကို ကိုယ်စားပြုသော ဂြိုဟ် ဖြစ်၏။ ယခု အခါတွင် ထိုသောကြာ အား- မမျှော်လင့် သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟု မှ အမြင်ပြု နေပါသည်။ ထိုသို.သော မမျှော်လင့်သည် ဖြစ်ရပ်သည် ကောင်းမည် လော၊ ဆိုးမည် လော ဆိုသည် မှာ - ဇာတာရှင်၏ မူလ ဇာတာတွင် ရာဟု ပေါ်တွင် မူတည် ပါသည်။ ဤဇာတာရှင် အတွက် ရာဟုသည် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင် သည့် ရာဟု ဖြစ်သည်ကို အထက်တွင် ရှင်းပြထား ပါသည်။
နောက်တစ်ချက် အနေဖြင့်- ဇာတာရှင်၏ မူလ ကြာသပတေးအား - ကောဇာ အင်္ဂါမှ ၄-တန်. အမြင် ဖြင့် အမြင်ပြုထားပြန်ပါသည်။ လွှမ်းမိုးမှု ပမာဏ မှာ လည်း ၆၁% ရှိပြန် ပါသည်။ အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ဇာတာရှင်၏ မူလ ကြာသပတေးသည်- ခရီးသွားလာခြင်း- Transportation ကို တာဝန်ယူသည့် ၄-တန်.ဘာဝ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေသည်။ ၄င်းအား- သွေးသံ ရဲရဲကို ပကတိ မူလတာဝန်၊ သေဆုံးခြင်း ဆိုသော ၈-တန်.ဘာဝ တာဝန်ကို ကာရက တာဝန် ယူထားသော အင်္ဂါ မှ အမြင်ပြု လိုက်ခြင်း သည် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ခရီးသွားလာယင်း- သွေးသံရဲရဲ- သေဆုံးခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေကို ဖော်ပြနေပါသည်။
ကောဇာ ဂြိုဟ်များမှ မူလ ဘာဝများ ပေါ်သို. အင်အား သက်ရောက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း။
အောက်တွင် ဆက်လက် ဖော်ပြထားသည်မှာ- ကောဇာဂြိုဟ်များမှ မူလ ဖွားဇာတာ၏ ဘာဝ ဗဟိုချက်မှတ်များ အပေါ်သို. သက်ရောက် လွှမ်းမိုးတို.ပင် ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ- ဇာတာရှင်၏ ကိုယ်ကာယ၊ အသက်၊ ကျန်းမာရေးကို တာဝန်ယူ ထားသော ၁-တန်.ဘာဝ (လဂ်) အပေါ်သို. ကောဇာ စနေမှ သမသတ် အမြင် ဖြင့် အတိအကျ နီးပါး အမြင် ပြုထားသည်။ မူလ ဇာတာတွင် လဂ်သည်- ကန်ရာသီ ၂၆း၂၈ တွင် တည်၍၊ ကောဇာစနေ သည် မိန်ရာသီ ၂၅း ၄၈ တွင် တည်နေခြင်း ဖြင့် သမသတ် အကွာ အဝေး အားဖြင့် ၁ အံသာ (ဒီဂရီ) မျှပင် မကွာဝေး တော့ချေ။ စနေသည် ဤဇာတာရှင် အတွက် မတော်တစ်ဆမှု၊ ရန်သူ စသည် တို.ကို တာဝန် ယူသော ၆-တန်.ဘာဝ ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေကာ- ယခု ကာလတွင် နောက်ပြန် သွားနေသည်။ ဂြိုဟ်တို. နောက်ပြန် သွားခြင်းကို (R ) ဖြင့် သင်္ကေတပြု ထားသည်။ MOTAA စနစ် အရ- နောက်ပြန် သွားသော ဂြိုဟ်တို.သည် အမှန် အားဖြင့် ၄င်း၏ အင်အား သက်ရောက်မှု ပို၍ ထိရောက်သည်။ (ဤအချက် သည် အဘယ့်ကြောင့် သမားရိုးကျ ကျမ်းများ နှင့် သဘောထားခြင်း မတူခြင်းကို မိုးတား သင်ခန်းစာ များတွင် ရှင်းပြပေးပါမည်။)
ထိုနည်းတူ ဇာတာရှင်၏ မူလ ဘာဝ၏ အရေးပါသော ဗဟိုချက်မှတ်များကို - ရာဟုနှင့် ကိတ်တို.မှ စုပေါင်း ဖျက်ဆီး လိုက်ကြပုံကို အောက်တွင် ဇယားနှင့် ဖော်ပြ ထားပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော်- ရွှေနန်းတော် တွင် နေထိုင်ကျင်လည် ရသော လှပသည့် မင်းသမီး တစ်ပါး ဖြစ်သော်လည်း- ဒိုင်ယာနာ ၏ ဘ၀သည် အမှန် အားဖြင့် လှောင်ချိုင့်စံ ငှက်ငယ် တစ်ကောင် ၏ ဘ၀ ထက်ပင် ဆိုးသော အဖြစ်၊ မိမိ၏ အောင်မြင် မှု၊ ကျော်ကြား မှုတို.သည် မိမိ၏ ဘ၀ လွတ်လပ်မှု အတွက် အနှောင် အဖွဲ. ထပ်မံ ဖြစ်ရုံမျှ မက- ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ရေး ဘ၀ ပျက်သုန်း၍ အမြဲ လိုလို အထီးကျန် ခံစားနေရသော၊ မည်သူ.ကို မျှ ယုံကြည်၍ မရသော ဘ၀ တွင် ရှင်သန် စဉ် တစ်လျှောက် နေခဲ့ရသည် သာမက- သာမာန် သေရိုးသေစဉ် ဖြင့်ပင် သေဆုံးခွင့် မရပဲ- ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်သုန်း ဇီဝိန် ချုပ်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်ကို စာရှုသူတို. နားလည် စေလိုပါသည်။